Saadaalinta Xilliga Duufaanta Sanadka 2016 | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Duufaannada, Saadaalin
Xilliga duufaanka Atlantic ee 2016, oo bilaabmaya 1-da Juun oo si rasmi ah u eg 30-ka Nofeembar, waxay yeelan doontaa inta u dhexeysa 10 illaa 16 duufaanno kuleyl ah oo lagu ogaan doono magac ahaan awoodda ay filayaan inay yeelato awgeed, sida laga soo xigtay Maamulka Qaranka. Badweynta iyo Cimilada (NOAA). Kuwaas, inta udhaxeysa 4 iyo 8 waxay noqon karaan duufaanno, iyo 4 waxay noqon lahaayeen kuwa si gaar ah u xoog badan.
Sida laga soo xigtay saadaasha, xilligan wuxuu noqon doonaa caadi ama ka yar.
20-kii sano ee ugu dambeeyay qarnigii la soo dhaafay, intii u dhaxeysay 1980 iyo 2000, waxaa jiray celcelis ahaan 12 duufaanno kulaylaha ah; lix ka mid ahi waxay noqdeen duufaanno, saddexna aad bay u darnaayeen. Si kastaba ha noqotee, sanadkii hore xilli ciyaareedku wuu fududyahay, 12 duufaan oo samaysmaya, 4 ka mid ahi noqdaan duufaannoSida Joaquín, oo yimid Spain sida duufaanka oo kale.
Sannadkan, 2016, Duufaantii Alex waxaa la sameeyay Janaayo 14, sidaas awgeedna waxay ku jirtaa meesha ugu sareysa liiska duufaannada la sameeyay tan iyo 1938. Saamayn ahaan: wuxuu ahaa dhicis kii ugu deg degga badnaa tobanaan sano ee la soo dhaafay. Sababtaas awgeed, in kasta oo xilli duufaanno la filayo inay caadi noqoto, iyo in kasta oo ay jirto 25% suuragalnimo inay ka khafiifto, haddana waxaa muhiim ah inaad u digtoonaato digniinta cimilada, maaddaama saameynta mid kaliya ay noqon karto mid dilaa ah.
Laga soo bilaabo Xarunta Duufaanta Qaranka waxay xuseen in duufaan kuleyl ah loogu yeero Bonnie Waxay ku sii jeedaysay South Carolina xawaare dhan 16km / saacaddii, iyadoo dabeylo gaaraya ilaa 65km / saacaddii 29-kii Maajo. Nasiib wanaagse, wuu daciifay oo wuxuu noqday diiqad kulaylaha.
1 Magacyada xilli ciyaareedka 2016
2 Xagee bay duufaannadu ka samaysmaan?
Magacyada xilli ciyaareedka 2016
Kuwaani waa magacyada xilli-ciyaareedka 2016:
Xagee bay duufaannadu ka samaysmaan?
Duufaannadu waa nidaamyo cadaadis hooseeya oo saacad kasta u roga dhanka Waqooyiga Hemisphere. Waxay ka samaysmaan badaha biyo diiran, agagaarka dhulbaraha, quudinta hawo diiran oo qoyan meelahaas.
Duufaannadu waa ifafaalooyin dabiici ah oo la yaab leh, laakiin waxay sababi karaan waxyeello weyn, sidaa darteed haddii aad ku nooshahay aag ay inta badan yimaadaan, waad ogtahay, taxaddar.
Waad akhrisan kartaa warbixinta Halkan (Ingiriisiga).
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Tani waxay noqon doontaa xilli-duufaantii 2016 ee Atlantic sida ay sheegtay NOAA
Saadaasha hawada ee aadka u xiisaha badan, waxay kaa dhigeysaa inaad ka warqabto waxa cimiladu ka dhigan tahay adduunkeenna.
5 run oo ku saabsan kuleylka adduunka